Polisy vaovao Okrainiana voarara amin’ny fampiasana tambajotra sosialy rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2015 10:12 GMT
Tsy misy VK na Odnokklassniki intsony hoan'ny polisy mpisafotanànan'i Okraina, nalaina sary teto tamin'ny andro fiasany voaloany tao Kyiv tamin'ny Jolay 2015. Sary avy amin'i Oleksandr Ratushniak ho an'ny Demotix.
Matetitetika ihany ny fahitana ny herintafiky ny polisy mpisafotanàna vaovao ao Okraina ao amin'ny media sosialy—ny marina ny fironandry zareo maka selfies sy ny fisongadinana amin'ny fijoroana vavolombelona ao amin'ny pejin'ny fampitam-baovao sosialy dia heverina ho anisan'ny paikadin-dry zareo hahazoana ny fitokisan'ny Okrainiana amin'ny polisy nohavaozina.
Saingy ankehitriny dia nanapa-kevitra ny handrara ny polisiny amin'ny fampiasana ny tambajotra sosialy rosiana ny minisitry ny atitanin'i Okraina. Midika izany fa fihoaram-pefy amin'ny fampiharan-dalàna Okrainiana ny VKontakte sy ny Odnoklassniki, ny sehatra rosiana roa malaza indrindra ao Okraina.
Niteny tamin'ny sampam-baovao LIGA.net ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Atitany Artyom Shevchenko fa ny famerana amin'ny fampiasana media sosialy dia mihatra amin'ny VKontakte sy ny Odnoklassniki, ihany fa tsy hihatra amin'ny kaonty Facebook na Twitter. Nanamarika ihany koa anefa i Shevchenko fa voarara “hiresaka vaovao mifandraika amin'ny asany” ao amin'ny pejiny ny polisy manamboninahitra.
Ny fanapahan-kevitra handamina araka ny lalàna ny fiseraseran'ny polisy ny fampitam-baovao sosialy dia toa mifandraika amin'ny fahitan'ireo Okrainiana mpiseraseran'ny aterineto miasa ao amin'ny polisy mpisafotanàna vaovao ireo tsanganana [lahatsoratra] taloha tao amin'ny fampitam-baovao sosialy izay heverina ho “tsy mendrika” eo imasin'ny mpaneho hevitra sasantsasany. Ny raharaha malaza dia ny an'ilay polisin'i Kyiv antsoina hoe Alexey Savkin, izay nanoratra imbetsaka tao amin'ny Twitter sy ny VKontakte nandritra ny fotoana nampafana ny hetsipanoherana Euromaidan miantso ny “hanesorana hatramin'ny fakany ireo mpirenirenin'ny Maidan” sady niaty fanehoankevitra hafa mitsikera ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo antoko mpanohitra tamin'izany fotoana izany.
Rehefa nahita sy nampiseho izany ny mpiserasera, dia nofafan'i Savkin ny iditra ary nakatony tsy ho hitam-bahoaka ny kaontiny, saingy efa tonga tany amin'ny Minisiteran'ny Atitany ny pikantsarin'ny tsanganana navoakany. Naaton'ny departemantan'ny polisy mpanao fisafoana i Savkin rehefa natao famotopotorana ny fihetsiny, ary taty aoriana dia nilaza fa hitan-dry zareo tao fa hita ao amin'ny fampitam-baovao sosialiny ny “fandikana ny fitsipika, ny fitondratena ary ny fomba entina misaina,” araka ny nolazain'ny tsanganana Facebook an'ny mpitondratenin'ny Minisitera Shevchenko.
Nampamaivay ny adihevitra teo amin'ny Okrainiana mpiserasera media sosialy ireo tsanganana momba an'i Savkin (nivoaka talohan'ny nidirany tao amin'ny polisy) sy ny fiantraikan'ny fihetsika nataony. Maro no nanondro fa tsy i Savkin irery no polisy namoaka sy nizara votoaty mampiady hevitra ao amin'ny media sosialy, ary misy aza arisiva natambatambatra amin'izay lazaindry zareo ho “tsanganana mampihevitra toe-panahy mpanohana mpisintaka” eo amin'ireo polisy mpanao fisafoana an'i Odessa. Rehefa fanta-bahoaka izany dia nangataka ny governoram-paritr'i Odessa Atoa Mikheil Saakashvili ny ampiatoana ireo polisy ireo amin'ny asany noho ny “famoahana votoaty anti-Okrainiana.”
Ny fanapahan-kevitry ny Minisiteran'ny Atitany dia akon'ny fandraràna ny manampahefanam-panjakana Okrainiana vao haingana tsy hampiasa ny servisin'aterineto rosiana. Tamin'ny Oktobra 2015 ny kabinetran'ny [filankevitra] Minisitr'i Okraina no nanendry fa ny servisin'imailaka amin'ny anaran-tsehatra gov.ua sy .укр (valan-tsehatra Sirilika Okrainiana) ihany no azon'ny manampaheana Okrainiana ampiasaina noho ny antony ara-piarovana. Notreronina sy noroahina ireo mpiasam-panjakana mampiasa servisin'imailaka rosiana amin'ny fifandraisana amin'ny asa aman-draharahany, noho ny finoan'I Okraina fa ny fampiasana imailaka amin'ny sehatra rosiana dia manome vahana ny sampan-draharaham-piarovana rosiana ka atao mora ahatra amin'ny fifandraisan'ny manampahefana Okrainiana ny lalàna.